Umaki: ukubuyekezwa kwe-ecommerce | Martech Zone
Maka: ukubuyekezwa kwe-ecommerce
NgoLwesibili, Septhemba 3, 2013 NgoMsombuluko, Septemba 2, 2013 Douglas Karr
I-70% yabathengi abaku-inthanethi bathi ukubuyekezwa kunomthelela omkhulu esinqumweni sabo sokuthenga (Umthombo). Ama-60% wabathengi abaku-inthanethi akhombisa ukuthi ukubuyekeza kuyizinto ezibaluleke kakhulu lapho ukhetha umkhiqizo. Futhi ama-90% wabathengi abaku-inthanethi bathemba izincomo ezivela kubantu ababaziyo. Unalokho engqondweni, yonke inkampani idinga ukusebenzisa izibuyekezo zokuthwebula kumikhiqizo nezinsizakalo zayo. Ukubuyekezwa kunezinselelo kumasayithi e-ecommerce, noma kunjalo: Ukubuyekezwa kudonsela zombili i-SPAM kanye nokubuyekezwa okuyiqiniso okuvela kubancintisana abangaphansi kokukhohlisa.